Ireo Bilaogera Libaney Sy Ny Fifanakalozan-kevitra Nasionaly: Tsy Mataho-maso Mena, Fisalasalàna, Ary Tara-Panantenàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2017 18:01 GMT
Ny hetsika nanana ny lanjany tao Libanona tamin'ity herinandron'ny 5 martsa ity dia ilay “Fifanakalozan-kevitra Nasionaly ” efa nandrasana hatry ny ela nifanaovan'ireo Libaney mpitarika vondrona maro samihafa. Nanana ny lanjany ilay fihaonana satria lasa tena nampivarahontsana ny fisamatsamahan'ny firenena.
Etsy ankilany, ny fifanomezan-tànana be eo amin'ireo Sionita, Kristianina ary ny Druze izay manohitra amin'ny fomba henjana ny dindon'ny Siriana ary manao fampielezankevitra hanongànana an'i Emile Lahhoud, filoha tohanan'ny Siriana. Etsy andaniny, ny vondron'ny Shiita maro an'isa mankahàla an'i Etazonia ary manana fijery mirona kokoa amin'ny fisakaizana amin'i Siria sy Iràna.
Na noarahabaina ho toy ny fahombiazana aza ny fisian'ilay fihaonana, marobe no nanipika ny hoe sambany no nisy fihaonana tahaka io natao ka tsy nisy tohana famatsiana avy any ivelany. Saingy mbola mila resena lahatra momba izany ireo Libaney bilaogera. Raha ny marina, voaporofo ny maha.vondrona iray be fisalasalàna sy tsy mataho-maso mena azy ireo.
Jamal, avy amin'ny tranonkala fampielezankevitry ny Jamal’, dia nanomboka ny lahatsorany talohan'ilay fifampiresahana tamin'ny hoe : “Indro ny fifanakalozan-kevitra nasionaly maty an-karànany”. Nanoratra izy, tamin'ny fanondrona ireo mpitarika: “Ny zavatra tsara indrindra mety hivoaka avy amin'ny resak'ireo olona ireo dia ny fampitsaharana ny fifandonana”, ary tsy nikoso-maso izy mamintina hoe : “Saingy tsy olana izany, indrisy, heveriko fa hahomby ilay fifampidinihana, ary dia hambara amintsika fa ho afaka isika ny hifankatia indray .”
Zadigvoltaire avy amin'ny “Beirut Notes” nitaraina hoe “Na miresaka aza izy ireo, miato tsy mitempo ny fon'i Beiroty”. Ireo fepetra henjana momba ny filaminana izay nitondra an'i Beiroty ho amin'ny fikatsoana no nambarany tamin'io.
Kais, avy amin'ny Beirut to the Beltway, no mamintina ny toepon'ireo Libaney :
Ny ratsy indrindra no andrasan'ireo Libaney no sady manatena ny tsara indrindra koa amin'ity anio ity, satria sambany tao anatin'ny taona marobe no mihaona mifanatri-tava ireo mpitarika azy mba handravona ireo olana fototra momba ny raharaham-pirenena. Tsy dia misy zavatra tsara antenaina loatra, miaraka amin'ireo mpaneho hevitra miantso ilay kaonferansa ho ny bàla farany eo an-tànan'ny firenena amin'ny resaka fampihavànana nasionaly.
Doha avy amin'ny “The Lebanese Bloggers”, manoratra mikasika ny lenta ambony be andrasana amin'ilay fihaonana :
..raha tsy mahomby ity fihaonana ity, dia vao mainka hamparary saina ny hahita fa angamba i Libanona dia hevitra iray tsy mahomby tsy mendrika ny ho firenana iray, tanindrazana iray
Ilay toetra tsy mataho-masomena sy ilay tantara mampihetsi-po dia nanosika ireo bilaogera hafa hizotra amin'ny fomba firesaka mahatsikaiky. Kais nandefa sary iray fanehoankevitra tamin'ireo sary nalaina avy ao anatin'ilay fihaonana, raha i Mustapha (mpanoratra ity lahatsoratra ity) sy Jamal kosa nandefa fifanakalozan-dresaka mamazivazy sy fanontaniana tsy ahitana valiny. Lazarus avy amin'ny “Letters Apart” nampitaha ilay hetsika taminà ampahany avy ao anatin'ilay sarimihetsika “The Godfather”.
Tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra dia tena mbola amperiny tokoa ny fihaonana ary ny tsirairay dia samy niandry izay ho vokany. Ny French Eagle no mamintina azy tsara (Fr): “Satria mbola eo am-piandrasana izay ho vokatr'ity fifanakalozan-dresaka nasionaly ity isika, tsy mbola misy azo ambara.”